Akụkọ - Aluminom panel
Fetures nke aluminum panel
1. Light light, elu rigidity na ike.
2. Ezigbo nguzogide ihu igwe na mgbochi corrosiveness Njirimara.
3. Enwere ike ịhazi ya na ụdị mgbagwoju anya.
4. Multicolor ịhọrọ.
5. Ọ dị mfe ihicha ma debe.
6. Na-adaba adaba iji wụnye.
7. Enyi na gburugburu ebe obibi, enwere ike imeghari ya 100%.
Gịnị bụ Aluminium panel?
Aluminom panel nwekwara aha aluminum efere, aluminum mkpuchi, aluminum cladding, na aluminum facade, ọ na-mere nke elu-ọkwa aluminum alloy, na-esichara site dị iche iche nhazi usoro dị ka ọnwụ, mpịachi, ekwe, ịgbado ọkụ, mesikwuru, egweri, sere, wdg.
Dị ka isi nhọrọ maka ịkpụcha ụlọ, ihe mkpuchi aluminom nwere oghere mmepe sara mbara ma e jiri ya tụnyere ihe ndị dị na mpụga dị ka tile seramiiki, iko, ogwe osisi mejupụtara aluminom, ụgbụgbọ mmanụ a andụ na mabul.
Aluminom ákwà mgbochi mgbidi obubọk n'elu bụ n'ozuzu chrome ọgwụgwọ, wee jiri fluorocarbon spray paint treatment. A na-ese paịlị siri ike nke aluminom na polyvinylidene fluoride resin nke nwere agba siri ike na agba ọla. Nwere nguzogide corrosion na nguzogide ihu igwe, mmiri ozuzo acid, nnu nnu na ihe ikuku ikuku di iche iche, iguzogide oke oku na oyi, nwere ike iguzogide radieshon ultraviolet siri ike, ogologo oge iji dobe ihe na-adighi agba, nke na-adighi nma na nke na-adịgide adịgide.
Ọ na-tumadi guzobere panel, stiffener, aluminum nkuku na ndị ọzọ na mmiri
Ngwunye aluminom: 1100 H24 / 3003 H24 / 5005
Panel ọkpụrụkpụ: 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm na 7.0mm
Ogwe ogwe: 600 x 600mm, 600 x 1200mm, 1300 x 4000mm ma ọ bụ ahaziri ahaziri
Aluminom panel adabara ochicho mma nke ime na mputa mgbidi, paseeji facade, kọlụm mma, na-agafe agafe agafe, mbuli njikọ, mbara ihu mkpuchi, ime ụlọ pụrụ iche ekara n'uko, wdg Owuwu mputa mpụga, ụkpụrụ ụlọ facade ibé na ogidi, mbara ihu, awnings, ọdụ ụgbọ elu. , ọdụ, ụlọ ọgwụ, opera, ámá egwuregwu, mgbatị ahụ na skyscrapers.
N'iji aluminium mejuputa aluminium, ihe omuma nke aluminom bu ihe doro anya karia ogwe aka, na nguzogide ikuku ya, ndu oru di nma karia aluminom. Ihe ọzọ bụ, aluminom panel na-emekarị chepụtara na-okokụre ngwaahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na arụnyere na saịtị.
Aluminom panel na-aghọwanye pop n'ụwa niile, ọ bụ nhọrọ amamihe gị maka iwuli ihe eji achọ mma.